15-Minute Bug Initiative inovavarira kumisa KDE kubva pakuva "buggy" | Linux Addicts
KDE ine vateveri vayo, asiwo vadzivisi vayo. Pakati pevateveri pane avo vanoisa pamberi pekubudirira, uye pakati pevashori pane avo vasingafarire kuona tsikidzi pavanenge vachishanda pane yavo yekushandisa system. Uye ndezvekuti KDE inokweva mukurumbira wakashata unobva kushanduro dzekare dzedesktop, uye kubvisa iyo mbiri yakaipa. ivo vaparura Kutanga 15-Minute Bug Initiative.
Mwedzi mishoma yapfuura vakatipa Plasma 5.23, chinyorwa chakanyorwa sechinyorwa chemakore makumi maviri neshanu, uye zvaizova zvakanaka kudai iri iro rainyatsokwana zvinhu zvose. Akanga asina nguva. Nokuda kweizvi 2022, Nate Graham akatiudza nezve 15-Minute Bug Initiative, asi kusvika nhasi ndipo paakapa mamwe mashoko.
1 15-Minute Bug Initiative inogona kuvandudza zvakanyanya KDE desktop
2 Chii chinonzi maminetsi gumi nemashanu bug yeKDE
3 Remangwana reKDE
15-Minute Bug Initiative inogona kuvandudza zvakanyanya KDE desktop
Yakanga isiri chakavanzika, uye Graham akazviziva kusvika padanho re, mundima yechipiri yetsamba yake, achiti "Nhoroondo, KDE software yave ichipomerwa kuve-yakawanda-yakawanda, yakashata, uye buggy. Kwemakore isu takanyanya kugadzirisa maviri ekutanga, asi dambudziko rebug rinoramba riripo«. Semushandisi weKDE, ndinofanira kubvuma kuti mazwi aya anondishamisa, nekuti hongu, chimwe chinhu chinogona kukwevera pfungwa kune zvakaipa, asi. Izvo hazvina kana kure kure sezvatakaona muKDE makore mashanu apfuura.
Asi zvine chinangwa, chokwadi ndechekuti KDE haina kugutsikana zvachose nezvavanopa, uye ivo vanoda kuivandudza. Danho racho rinoshandurirwa muchiSpanish se "Initiative of bugs in 15 minutes". Ndiko kuti, Graham anotsanangura kuti patinenge tichidzidzisa chimwe chinhu pamusoro pePlasma kumunhu uye tinoona zvipembenene zvakawanda panguva, ndicho chinhu chekutanga kugadziriswa. Vanosiya kuravira kwakashata mumiromo yavanhu ndokupa murangariro wokuti gadziriro yacho yakafanana neimba yamakadhi.
KDE yakavhurwa Peji rimwe saka icho chero munhu anoziva chero chinhu nezve budiriro basa pane bugs kubva pane iyo rondedzero yekuvandudza kodhi, uye kuti chigamba chega chega chakakosha kuita mutsauko. Zvino, chii chinonzi 15 minutes bug?
Chii chinonzi maminetsi gumi nemashanu bug yeKDE
Inofanirwa kusangana nechimwe kana zvimwe zvezvikamu pane iyi runyorwa:
Inokanganisa zvigadziriso zvekutanga.
Chimwe chinhu chakakosha hachishande (semuenzaniso, bhatani hariite chero chinhu kana rakadzvanywa).
Chimwe chinhu chakakosha chinoita senge chakatyoka (semuenzaniso, iyo "korners" bug).
Zvinokonzera kuparara kwehurongwa.
Zvinokonzera kuparara kwechikamu chose.
Inoda reboot kana terminal mirairo kugadzirisa.
Iko kuderera kwezvino.
Chirevo chebug chine zvinopfuura 5 zvakapetwa.
Kubva pane zvinowanikwa, zviri kune vanogadzira KDE kuti vasarudze kuti voiisa mubug inoverengera kugumi nemashanu-Minute Bug Initiative. Rumwe ruzivo rwuri mutsamba yaGraham, pakati payo isu tine chimwe chinhu chinonakidza: kana tisiri vagadziri, tinokwanisawo kubatana nenzira yakapfava, inova yekutarisa kuti ndezvipi tsikidzi dziripo uye edza kusimbisa kuti dziriko.
Chirongwa ichi chine shungu. Haisisiri kungogutsikana kuve pane mamwe makomputa; ikozvino vari mune zvimwe zvikwata zvakaita seSteam Deck, PINE64 yakasarudza Plasma (Manjaro) yePinePhone yako, tinogona kuishandisawo pamapiritsi... Yakawedzerwa pane izvi zvose idanho iri rekubvisa tsikidzi dzose dzinotaurwa ne "vanovenga" zvakanyanya pavanotaura nezve KDE.
Kana zvirongwa zvepurojekiti zvikafamba nenzira yavakatanga, KDE haichazopa zvikumbiro zvinogadzira (KDE Gear) uye isina huremu uye inoratidzira yakazara desktop (Plasma). Zvakare tichakwanisa kushanda nenzira inofananidzwa nemaitirwo atinoita muGNOME, chero isu tichishandisa timu isiri yakaderera-resource. Vachaiwana here? Ini handina kupokana, uye ivo vangangokwanisa kukwezva vese vashandisi vakasundirwa kumashure nebugs makore mashoma apfuura. Kwese kwazvinotora isu, iyo 15-Minute Bug Initiative yakatotanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » 15-Minute Bug Initiative inovavarira kubvisa KDE mubhagi kamwechete zvachose
Kana iwe ukapa sarudzo kune kubereka, saka kde haina kufanira, unenge waratidza zvisizvo, nekuti mukubudirira chinodiwa kugadzikana uye kugadzikana.
Zvinenge zviri kuti iwe unoda hutsva, zvichienzaniswa nekubudirira.
Chinyorwa chikuru, chagara chichizivikanwa sebuggy zvakanyanya nevashandisi asi hazvina kumbobvira zviri pamutemo. Mamiriro ezvinhu anondiyeuchidza nezveavo Ubuntu kubva pakati pe-2000s uko mahwindo ebasa rekutonga akasiiwa aine mbeva pointer ichitenderera.
Ini pachangu ndaifanira kuisa Xfce pakombuta yekare nekuti kunyangwe Plasma pakutanga ichidya RAM diki, inowana toast pazvinhu zvakaita sekugadzirisazve kiyi yekukiya kupinda mulop yepassword isiriyo paunoipinda neupofu, kana midzi password password yekuchinja kwega kwega muPlasma. zvido.
Iyo ndiyo inonyanya kugadzira desktop nekusarudzika asi zvakare ndiyo yakaipisisa muUX interface.
Iyo yechina vhezheni yezvigamba zveRust mutyairi rutsigiro paLinux yaburitswa
WINE 7.0, yave kuwanikwa, inounza kuvandudzwa kuWoW64 uye nerutsigiro rwetheme iri nani, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva.